Yohane Adiyisɛm 3 NA-TWI - Sardi asafo no nhoma - “Kyerɛw - Bible Gateway
Yohane Adiyisɛm 2Yohane Adiyisɛm 4
Yohane Adiyisɛm 3 Nkwa Asem (NA-TWI)
3 “Kyerɛw krataa kɔma asafo a ɛwɔ Sardi no se: “Eyi ne asɛm a efi obi a ɔwɔ Onyankopɔn ahohom ason ne nsoromma ason no nkyɛn. Minim nea woreyɛ. “Minim sɛ woagye din sɛ wote ase nanso woawu. 2 Enti nyan na kanyan nea aka wo nkyɛn no na anwu koraa. Efisɛ, mahu sɛ nea woayɛ no nya nnii mu wɔ Onyankopɔn anim. 3 Kae nea wɔkyerɛɛ wo no ne sɛnea wotee no. Di so na twe wo ho fi wo bɔne ho. Sɛ woankanyan wo ho a, mɛba wo so sɛ ɔkorɔmfo, na worenhu bere ko a mɛba.